निहारीका सफलता चुम्दै - Baikalpikkhabar
निहारीका सफलता चुम्दै
विराटनगर / विराटनगर स्थित निहारीका कलेजले एम.वि.एस. दोश्रो सेमेष्टर र चौथो सेमेष्टरमा यो क्षेत्रकै उत्तकृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको छ ।
हालै त्रिभुवन बिश्व बिद्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा २०७४ सालको एम.वि.एस. चौथो सेमेष्टरमा सहभागि १३ जना बिद्यार्थी मध्ये ५ जना बिशिष्ट श्रेणी र बाकी प्रथम श्रेणीमा उत्र्तीण भएकाछन् ।
परिक्षामा रमेश बास्तोला र तिलक पराजुलीले ३.८३ जिपिए प्राप्त गरेको क्याम्पस प्रमुख अमित ढकाले जानकारी दिए । साथै २०७५ सालको व्याचको एमबिएस दोश्रो सेमेष्टरमा सहभागी २७ जना परीक्षार्थी १८ जना प्रथम श्रेणीमा र ९ जना द्धितिय श्रेणीमा उत्तिर्ण भएकाछन् ।
परीक्षमा नितु शाहाले ३.६८ जिपिए प्राप्त गरेको क्याम्पस प्रमुख ढकालले बताए ।
बिहिबार, ०५ चैत, २०७७, बिहानको ०९:१७ बजे
काठमाडौं, भदौ २९ / स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार बालबालिकाले जनस्वास्थ्यको सहि मापदण्ड पालना गर्न सक्दैनन्। ‘हातले नाक, मुख नछोउ र बाहिर नजाउ भनेर अभिभावकले सम्झाए पनि विद्यालयमा पुगेपछि पालना गर्छन् नै भन्ने छैन,’ उनले भने। नेपाल बाल चिकित्सक
काठमाडौं , भदौ १८ / मुटुलाई स्वस्थ राख्न हरेक दिन ३ कप कफी पिउन जरुरी छ । हरेक दिन ३ कप कफी पिउँदा २१ प्रतिशत स्ट्रोक र १७ प्रतिशत हृदयरोगको खतरा कम हुन्छ । हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टस्थित सेमेल्भिस युनिभर्सिटीमा गरिएको
छलफल कार्यक्रममा सहभागी भईदिने बारे बेलबारी नगरपालिकाको सूचना